Igazi e kwesihlalo e amakati - Kuyaziwa ngempela, kodwa ngenxa yokuthi umuntu ngamunye endlini ohlala isilwane, udinga ukwazi ukuthi kungabangela le nkinga, futhi kanjani ukukhetha imithi ekufanele. Yiqiniso, indlela elula ukuthatha isilwane sakho ukuze Vết, kodwa hhayi wonke umuntu angakwazi ukukwenza. Ngokwesibonelo, ukuya futhi ukuya emaphandleni kudokotela ezinhle, futhi akubona bonke abafuna ukusebenzisa ngayo imali ethe xaxa futhi isikhathi uphethwe, uma kungenziwa ngokuzimela. Futhi noma kunjalo, uhambo Vết - kuyakhandla isilwane, kungani senze isimo sishube kungekho isidingo? Ngaphezu kwalokho, ngeshwa, odokotela, kokubili onkulunkulu abantu nezinkomo, futhi kungaba futhi okungalungile. Futhi ngezinye izikhathi umnikazi uyasiqonda isimo sesilwane sakho.
Igazi e kwesihlalo e amakati: lavelaphi?
Singene imikhiqizo yemvelo sadlala isilwane lolu ketshezi kungaba kusuka pheshana emathunjini. Ukuze unqume lendawo oluqonde kakhulu umonakalo kungenzeka, benze kunakwe umbala waso. Ngakho, uma igazi ikati kwesihlalo kuxhopha, ukukhanya, ongasho ngokuqiniseka ukuthi wayebathulisile ezilimele ingemuva, mhlawumbe ngisho ingquza. Futhi uma amnyama Kwabiwa - kuze ikhofi-anemibala, umthombo yabo esiswini kakhulu noma amathumbu engenhla. Ngokolwazi, ukubheka inkinga kulula.
Igazi e kwesihlalo e amakati izimbangela
Ngakho, zama ukuhlaziya ngokuningiliziwe izimo ezingase zibangele enkingeni enjalo. bacabangela Uyothola kahle hhayi kuphela ukuqonda imbangela yenkinga, kodwa futhi ukuvimbela ivela khona. Futhi kuba lula kakhulu kunokuba welapha imfuyo ongathi lokho afuna futhi lapho kubuhlungu.
Kulokhu, umonakalo kungenzeka ukuba wokugaya ukudla ipheshana Ukudla ngendlela elukhuni, ikakhulukazi uma izilwane ezidla ngaphambi kwanoma yini enye. Ngokwesibonelo, kitten lalingabulawa kalula bhala esiswini ukudla eyomile, yincane ngokwanele gnawing, futhi i cat omdala kungabangela ukulimala ngokwayo, ukugwinya ucezu ithambo. Ngakho-ke, ukuqinisekisa ezanele ukudla izinga - umthwalo ngqo yomnikazi.
Ukutheleleka nge helminths
Lezi yizilwanyana eziwuhlupho ingadala umonakalo emathunjini, njengoba ubuhlungu odongeni yakhe. Ngakho-ke, uma igazi ikati kwesihlalo zibomvu, kukhona ukwephulwa kwesitulo, uyenqaba ukudla isebujameni ecindezelekile naphezu kweqiniso lokuthi isilwane muva okuncane kwaze bejabule futhi bajabule, kufanele usinike anthelmintic, futhi isibili, nge esingaba kwezinsuku ezingu-7. Into esemqoka - ukukhetha izidakamizwa kwesokudla kanye umthamo. Kodwa uma lezi zimpawu enjalo ebonwe isilwane ncamashi kungenzeka itheleleke, amateur engamukeleki - udinga ngokushesha ukuya vet.
Igazi e kwesihlalo e amakati kungenzeka emva ukungenisa into indigestible. Kulokhu, ithuba kuphela ukuze asindise ukuphila nempilo isilwane kuyinto ukuvakashelwa ngokushesha kudokotela.
Le nqubo ukuvuvukala kule ikholoni kuvamile kakhulu izilwane ne ukopha. Lapho lesi sifo libhekene streaks kwegazi ne isikhwehlela e kwesihlalo. Kuyadingeka ukuya vet.
Igazi endleni zamakati zingavela ngasiphi ukuvuvukala esiswini noma emathunjini, kodwa futhi lapho beshintsha microflora, isifo sesibindi noma ukuphazamiseka umsebenzi amanyikwe. Uma ukuthola imbangela yezimpawu bebodwa bengayi, musa ukuchitha isikhathi - kufanele ngokushesha ukuthatha isilwane sakho ukuze Vết. Akumelwe sikhohlwe ukuthi yisiphi isifo e amakati okungukuthi othuthukayo okuningi ngokushesha kunokuba umuntu, kodwa ngenxa ukubambezeleka kungaba sengathi ukufa.
Kungani ubuhlungu kwedolo?
Pads for underarms